यस्ता खानेकुरा जसले बचाउँछ छाला चाउरी पर्नबाट र देखाउँछ तन्दुरुस्त र जवान – Etajakhabar
यस्ता खानेकुरा जसले बचाउँछ छाला चाउरी पर्नबाट र देखाउँछ तन्दुरुस्त र जवान
काठमाडौँ । बृद्ध हुनु प्राकृतिक नियम हो । उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने ? युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका लागि फलफूलमा विशेष जोड दिनुपर्छ । सर्बसुलभ रुपमा पाइने पाँच प्रकारका फलफूलले तपाईको छालामा चमक ल्याउछन् ।
अनार : अनारमा ठूलो मात्रामा प्युनिसिक एसिड, इलेजिक एसिड र एन्टिअक्सिडियन्टस हुन्छ । ओमेगा ३ फ्याटी एसिडयुक्त अनारले छालाको कोषलाई बृद्धि गर्छ । यसले रेड ब्लड कर्पुस्केल्स (आरबीसी) हुने रक्त प्रबाहका लागि उपयोगी हुन्छ । यसमा भिटामिन ए, सी इ लगायत महत्वपूर्ण खनिज हुन्छन् । यो एउटा स्वभाविक मोश्चराइजर पनि हो जसले छालालाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ । स्वास्थ्य खबरपत्रिका
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र १४, २०७४ समय: ७:५५:५४
डाक्टरको चरम लापरबाही , यि सानी नानीको एउटा हात भाँचीएकोमा अर्कोमा गरे पलाष्टर
कस्तो लाजमर्दो ! स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै ५ सय प्याकेट सुर्ती बरामद